घर र व्यवसाय मिलीजुली चलाउँछौं – NepalayaNews.com
घर र व्यवसाय मिलीजुली चलाउँछौं
७ पुष २०७२, मंगलवार १४:५६
समीर महर्जन र सूर्य श्रेष्ठ महर्जन न्युयोर्कका नेपाली माझ परिचित जोडी हुन् । कुनै पनि सामाजिक कार्यमा होस् या व्यवसाय दुवै क्षेत्रमा उनीहरुको सक्रियता छ । क्विन्स एन्ड डायमन्ड ज्वेलरी उनीहरुले सञ्चालन गरिरहेको व्यवसाय हो, जुन न्युयोर्कमा लोकप्रिय छ । यो व्यवसाय न्युयोर्कका अलाबा अन्य ठाउँमा पनि फैलाउन उनीहरु सफल छन् । २ छोरी र एक छोराका साथमा यहाँ बस्दै आएको यो जोडीको सफल र सुखद दाम्पत्य र व्यावसायिक दुवै जीवन अरुका लागि पनि प्रेरणादायी छ । नेपालय पाक्षिकका लागि विष्ष्णुप्रसाद पौडेले महर्जन दम्पतीसँग जीवनसाथी संवाद स्तम्भका लागि गरेको कुराकानी ः
समीर ः हाम्रो जोडीको भेट कसरी हुन पुग्यो भन्नु पर्दा कुरा अलि लामो हुन पुग्छ । हामी नेपालको सगरमाथा बोर्डिङ स्कुल जाउलाखेलमा नर्सरी कक्षा देखि नै एउटै स्कुलमा पढ्ने गथ्र्यौं । कक्षा छ, सातदेखि हामीले एक अर्कोलाई मन पराउन थालिसकेका थियाै ।
भनेपछि तपाईहरुको प्रेव विवाह ?
समीर ः हजुर हामीहरुको प्रेम विवाह नै हो ।
विवाह भएपछि तपाई अर्कोको घरमा जानु भयो । त्यो बेला पारिवारिक रुपमा कस्तो महसुस भयो ?
सूर्य ः खासमा भन्नु पर्दा विवाह अगाडि पनि म समीरको घरमा बेला बेलामा जाने गर्थें । त्यसैले गर्दा सबै जनासँग मेरो चिनाजानी हुन पुग्यो । त्यसैले आफ्नै घर जस्तो लाग्यो । उहाँको घरमा सबैजनाको मिल्ने परिवार भएकाले मलाई कहिल्यै पनि कुनै अप्ठेरो भएन ।
सूर्यजी घरमा आएपछि बाआमाको प्रतिक्रिया के पाउनुभयो ?
समीर ः खासमा भन्नु पर्दा हामी घरमा तीन दाजुभाइ छौं । सूर्य हाम्रो घरमा आइसकेपछि ट्रनआउट जस्तो भएको छ । किनभने मेरो घरमा ठूलो भाउजु फिलिपिनो हुनुहुन्छ । तर फिलिपिनो भएता पनि उहाँले धेरै कुरामा एडजस्ट गर्नुभएको छ । उहाँ नेपाली जसरी नै एडजस्ट हुनुभएको छ । मेरो माइली भाउजुचाहिँ निकै शान्त स्वभावको धेरै नबोल्ने खुरुखुरु आफ्नो काम गर्ने मिलनसार स्वभावको हुनुहुन्थ्यो । र सूर्यचाहिँ कान्छी बुहारी उहाँ एकदम एक्टिभ,घरको बुहारीभन्दा नि छोरी जस्तो हुनुहुन्थ्यो ।
तपार्इंहरु व्यवसायमा सँगसँगै हुँदा कस्तो अनुभव पाउनुभएको छ ?
समीर ः हुन त मैले धेरैजनाको कुरा सुनेको छु, श्रीमान् श्रीमती दुवैजना एकै ठाउँमा सँगै काम गर्ने भएपछि जुन श्रीमान् श्रीमतीमा हुनुपर्ने हो त्यो हुनुपर्ने चिज कम हुन्छ भन्ने । तर हाम्रो केसमा भने त्यो लागु भएको छैन । कहिलेकाही काममा तलमाथि हुन्छ । मेरो गल्तीमा सूर्यले सच्याउनुहुन्छ सूर्यको गल्तीमा मैले सच्याउँछु । त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । एकदमै रमाइलोको साथ काममा हामी लागीरहेका छौं । त्यसैको परिणाम होला आजसम्म काम पनि राम्रै भइरहेको छ । हामी हाम्रो परिवारमा तीनजना बच्चाहरु छन् । उनीहरुलाई पनि हामीले पालै पालो राम्रै समय दिएका छाै ।
व्यावसायिक जीवनले घरपरिवारको जीवनलाई केही फरक हुँदोरहेछ कि नहुँदो रहेछ ?
सूर्य ः वास्तवमा केटी मान्छे बिजनेसमा आउँदा अवश्य पनि केही अप्ठेरो त हुन्छ नै तर, पनि हाम्रो आफ्नै काम भएको हँुदा बच्चाहरुलाई पनि समय दिएकै छाै । तर एउटा स्वभाव हुन्छ नि म अलि कामतिर बेसी ढल्कन्छु । त्यसैले समीरले मलाई बेला बेलामा सम्झाउनु हुन्छ अलि बढी घरतिर फोकस गर भन्नुहुन्छ तर मेरो फोकस अलि बढी कामतिर जान्छ । कामतिर जाँदा कति चिज मैले गर्नुपर्ने बच्चाहरुको काम समीरले मलाई सयोग गर्नुहुन्छ । त्यसो गर्दा गारो त गारो भएको छ तर, हामी दुवैजनाको समझदारीमा घर परिवार पनि बिग्रेको छैन । काम पनि नबिग्रने किसिमले दुवैजना मिलेर काम गरिएको छ ।
तपार्इं आफ्नो लागि आफैं गर्नुहुन्छ कि सूर्यजीले ?
समीर ः मेरो लागि सपिङ अहिलेसम्म सूर्य नै गरिदिएको छ । यो अस्ति भर्खरको कुरा हो मैले एउटा सर्ट किनेको ल्याएको थिएँ । मैले किनेको देखेर उहाँ आश्चर्य हुनुभयो । किन कि मैले जे चिज किने नि सूर्यको रोजाइमा किन्ने गरेको छु ।
तपाईंको विचारमा समीरजीलाई कुन पहिरनमा सबैभन्दा बढी राम्रो देखिन्छ ?
सूर्य ः मेरो विचारमा उहाँ बिजनेस मेनको हिसाबले पनि उहाँलाई सट पाइन्टमा नै राम्रो देखिन्छ ।
समीरजीले खानामा बढी के रुचि राख्नुहुन्छ ?
सूर्य ः खानामा उहाँले सिम्पल, अलि पिरो नुन चर्को, रुचाउनुहुन्छ ।
सूर्य ः हामी टुकेगर भएको १८ वर्ष जति भयो होला । किचनमा अहिलेसम्म मलाई थाहा भएसम्म दुईचोटि सघाउनुभयो होला । त्यो पनि म बिरामी भएको बेलामा मात्र ।
समीर ः हो उनले भनेको कुरा ठिकै हो । मैले भाँडासाडा माझ्थेें अमेरिकामा सबै चिज म्यानेज गर्नुपथ्र्याै ।
उहाँको कुन पहिर तपाईंलाई मन पर्छ ?
समीर ः मलाई सूर्यले सारी लगाएको मन पर्छ ।
सूर्यजीको तपाईंलाई मन नपर्ने बानी ?
समीर ः सायद यो केटीहरु सबैको बानी होला ? के भन्ने आफ्नो मन मिल्ने साथी भेट भएपछि कुरा गर्दै जाँदा भन्न हुने नहुने सबै कुरा घरको कुरा मनको कुरा सबै भन्ने । अर्को कुरा उनी बिजनेस परिवारमा आएर हो कि किन हो उनलाई अलि बढी काम गर्न मन लाग्छ । त्यसले गर्दा उनले आफ्नो स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल गरेको हँुदैन ।
सूर्यजीको मन पर्ने बानी ?
समीर ः मलाई उनको मन पर्ने बानी भनेको उनले मलाई असाध्य धेरै माया गर्दछिन् र घरमा हामीसँगै हँुदा खेरी हरेक चिजहरु बनाएर परिवारमा रमाइलो गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छिन् ।
समीरजी को मन नपर्ने बानी ?
सूर्य ः उहाँको सबै कुरा मलाई मन पर्छ तर, एउटा कुरा उहाँको ढिला सुत्ने बानी मलाई मन पर्दैन ।
समीरजी को मन पर्ने बानी ?
सूर्य ः उहाँ जसलाई पनि ट्रस्ट गर्नुहुन्छ, त्यो बानी मलाई एकदम मन पर्छ ।
अन्तमा भन्नुपर्ने केही बाँकी छ ?
समीर ः सूर्यजीसँग सधैं भेट्न पाउँदैथ्यो । उनीहरुको टोल पुल्चोकमा भेट्न जान्थें । उनको घर अग्लो थियो । उनी कौसीमा आउँथिन् । म सडकमा जान्थें । हामी देखादेखा गथ्र्याैं । त्यति हुँदा पनि रमाइलो हुन्थ्यो । हामीले देखादेख गर्दा एक दिन आमाले देख्नुभएछ । अनि उनी भित्र पसिन् । मलाई डर लाग्यो, अब आमाले के के गर्ने हो भन्ने लाग्यो । सँगै गएको साथीले तिमी नडराऊ भन्दै मलाई ढाडस दियो । साथीले तिमी लैजान्छौं भने म कुरा गर्छु भनेर हौसला दियो । हामी गयौं उनको घरभित्र । उनको आमाले किन आएको भनेर सोध्नुभयो । मैले सिधैं सूर्य मन पर्छ भनेर त्यति सानो उमेरमै एप्रोच गरें । आमाले राम्ररी जवाफ दिनुभयो । स्कुलका साथीहरु रहेछौं भनेर पोजेटिभ कुरा गर्नुभयो । हामी जम्मा ९ कक्षामा पढ्थ्यौं । आमाले तिमीहरु सानै छौं । अहिले एसएलसीलाई ध्यान देऊ भन्नुभयो । भोलिपर्सि बिहे गर्ने हो भने पनि केही फरक पर्दैन भन्नुभयो । बरु बाहिर बाहिर नभेट, घरमै आऊ भन्नुभयो । सायद घरमै आऊ भनेर आमाले मलाई चिन्न खोज्नुभएको पनि थियो होला । जाँदा जाँदा चिन्नु पनि भयो । रमाइलो भयो ।
सूर्य ः म एकपटक उहाँको घरमा गएकी थिएँ । उहाँको आमा धान सुकाइरहनु भएको रहेछ । कुराकानीकै क्रममा आमाले त ल अब तिमी आफ्नो घर जानुपर्दैन भन्नुभयो । म छक्क परें ।
एप्पलले हरेक ३/ ४ हप्तामा किन्यो एउटा कम्पनी ७ पुष २०७२, मंगलवार १४:५६
अमेरिकी आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ गर्न बाइडेनद्वारा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर ७ पुष २०७२, मंगलवार १४:५६
स्व. आङ् पासाङ् लामाको परिवारबाट शेर्पा किदुग अमेरिकालाई पचास हजार डलर सहयोग ७ पुष २०७२, मंगलवार १४:५६